I-HBO Hooks Iinkwenkwezi zeYouTube zoLuhlu lweWebhu - Iphepha Lasekhaya
Eyona Iphepha Lasekhaya I-HBO Hooks Iinkwenkwezi zeYouTube zoLuhlu lweWebhu
I-HBO Hooks Iinkwenkwezi zeYouTube zoLuhlu lweWebhu
Inkqubo ye-HBO kwi-intanethi HBOlab uqokelele iinkwenkwezi zeYouTube kunye nevidiyo yeebhlog zokuqhakamshelana nomntu ngamnye kuthotho lweewebhu ezili-10 abazibizayo… Ukuhlangana phezulu .
UJessica Rose (aka wedwa ), UFilipu DeFranco (aka sxePhil) noKevin Wu (aka KevJumba) baya kuba kuhlobo 90210: Iminyaka yeKholeji kumdlalo obonisiweyo. Bazakube besebenza njengabafundi eyunivesithi abangathumelani ngokufanelekileyo nge-imeyile, umyalezo okhawulezileyo kunye ne-Twitter. Umlinganiswa ngamnye uya kuba nephepha lakhe kuFacebook kwaye uthotho luya kuqala kwi-Okthobha 1 kwi-YouTube, MySpace nakwihookingupshow.com.
Abaphathi be-HBO uxelele IThe Hollywood Reporter lonto le Umboniso wewebhu uya kuphumelela kuba zininzi iinkwenkwezi ze-intanethi kuwo. Kwi-HBOlab, 'Ukukhangela' lithuba lokuthatha kwinqanaba elilandelayo ulwazi oluye lwafunyanwa kukufunyanwa kwevidiyo kwi-Intanethi.
'Ndicinga ukuba sizakubona ukubetha okungaphezulu kokuphosa abantu abahlekisayo ongabaziyo, utshilo uFran Shea, intloko ye-HBOlab.
Umanejala wobambiswano lomxholo we-YouTube uGeorge Strompolos ufanise imvelaphi ye'Hooking 'necebo lezinto eziphilayo eliqeshwe ngamanye amaxesha ziinkwenkwezi zesiza sakhe, ezithi zivele kwiividiyo zabanye ukuwela ipollini kubaphulaphuli babo.
'Kwenzekile ngaphambili, kodwa akuzange kubekho nkampani yokwenyani yemveliso ekweli nqanaba lenkxaso elungelelanisa yonke into, utshilo. 'Iya kuba kukutyhala okungaphezulu kuyakufuneka uphume phandle ngendlela elungileyo, emnandi.'
Huh. Kubonakala ngathi sisidenge esisuka kwisitudiyo sexesha elikhulu sizama ukutsala 'abo bantwana baphambeneyo.' Uthotho lweWebhu kufuneka lube nomdla, lubhalwe kakuhle, iinkqubo zomgangatho (njengeTV eqhelekileyo). Oku kuvakala nje kungabizi kakhulu!
KwiiVideos eziKhulu, ukuQinisekiswa koBomi kuphela kukufa kunye neRhafu-kunye neenwele
Inkosikazi yeCawa uLaura Ingraham kunye noShannon Bream Bonisa iMiboniso kwiFox 'Iindaba'
Ungazithemba Nini Ekhaya Uvavanyo lwe-COVID-19?
UHugh Hefner Uhambile (RIP), Lixesha lokuba iiBunnies zivukele
Ngaba induli ibalekela usodolophu we-ny
Ngaba u-meghan no-kate bayavana
Iimuvi zeDisney ukubukela phezulu
Ihlabathi lokwenyani legazi elibi isiqendu 3
eyona nto iphambili kwipilisi yokutya